Kooxo hubeysan oo boosaaso ku dilay Taliye Barkhad Maxamed Jaamac. – XAMAR POST
Kooxo hubeysan oo boosaaso ku dilay Taliye Barkhad Maxamed Jaamac.
By Mohamed Abdi On Jan 26, 2022
Taliyihii hore ee kantoroolka Bosaaso Barkhad Maxamed Jaamac oo loo yiqiin Guduudane ayaa saaka lagu dilay magaalada Bosaso gaar ahaan waddo aad mashquul u ah oo shacab badan ay joogeen, taa oo gasha suuqa Bosaso, Waxaana baxsaday kooxdii dilka gaysatay.
Guduudane, oo darajadiisu ahayd kabtan ayaa ciidamada laga ruqseeyey sanand kahor markii ciidamada iyo saraakiisha Puntland lagu xareeyey kuliyadaha booliska ee Carmo Iyo Xorgoble , sida Daljir ay u xaqiijiyeen dad marxuumka lasoo shaqeeyey.
Sababta ruqsaynta ayaa ahayd siyaasadda Xukuumadda madaxwayne Deni oo ahayd askarigii ama sarkaalkii aan kuliyadahaasi gelin la ruqseeyo, isagoona diiday inuu kuliyadahaasi oo ciidamada iyo saraakiisha lagu xaraynayay sanad kahor uu galo.
Laba jeer oo hore ayuu marxuumka uu soo noqday taliyaha kantoroolka Bosaso.
Hogaamiyaha golaha kacdoonka gobolka Hiiraan oo ka hadlay xaaladda Baledweyne
Golaha wasiirada oo isku raacay in la soo saaro ciidamada la geeyay Beledweyne